Nuxurka Bayaankii Guddoomiye Jawaari Ee Mooshinka Madaxweynaha: FAALLO – Radio Muqdisho
Qormadan, waxaan ku soo koobi doonaa nuxurka bayaankii guddoomiyaha baarlamaanka ka soo baxay ee uu uga hadlay waddooyinka lagu xallin karo mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ee ay keeneen xildhibaanada qaarkood, maaddaama aysan dhisnayn maxkamadda Dastuuriga ah oo sharci ahaan qaadi karta dacwaddan. Bayaanku wuxuu caddeynayaa xal sharci ah iyo mid SULUX ah laakin aanan sharciga khilaafsanayn oo loo mari karo dhammaynta kiiskan.
Mudaneyaasha baarlamaanka iyo madaxda dowladda gaar ahaan xukuumadda iyo madaxtooyadu, maalmihii la soo dhaafay waxay hadal hayeen sharci ahaanshaha soo jeedinta “Gabood-falidda” madaxweynaha ee ay qaar ka mid ah xildhbaanadu u gudbiyeen guddoonka baarlamaanka.
Qoraalkii ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka ee lagu lifaaqay dhowrka warqadood, ayaa caddeeyay laba waddo oo midna sharci tahay halka jidka kalena uu wada-hadal yahay oo lagu xallin karo mooshinkaan, maaddaama aysan dhisnayn maxkamaddii dastuuriga oo lahaan lahayd awoodda qaadista dacwad ka dhan ah madaxweynaha.
Arrinta labaad ee bayaankan ku jirta ayaa ah, in wada hadal lagu dhameeyo arrinta, oo ay madaxtooyada, xukuumadda iyo baarlamaanku ka wada hadlaan sidii qaab SULUX ah oo “sharcigana wafaaqsan” loogu dhamayn lahaa arrinkaan. Kaddibna heshiiskaas la geeyo golaha baarlamaanka si uu dhaqan-gal u noqdo.
Wafdi uu hogaaminayo Wasiirka Gaashaandhigga oo maanta la kulmay shacabka Ceelbuur “SAWIRRO”
Dowladda Federaalka Soomaaliya oo heshiis xog sahmineed la gashay shirkada Spectrum ASA